MINISITERAN’NY RAHARAHAM-BAHINY FRANTSAY : Manohy ny tsindry tsy tokony hilatsahan’ireo kandidà telo
Nohamafisin’ny mpitondra teny eo anivon’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny frantsay ny alatsinainy teo ny amin’ny tokony hisintahanan’I Lalao Ravalomanana, Rajoelina Andry ary Didier Ratsiraka amin’ny fifidianana Filoham-pirenena. 3 juillet 2013
Ity fanambaràna ity dia mifanohy amin’ny an’ny Vondrona Eoropeanina, Vondrona Afrikanina ary ny Sadc. Ankoatra izay dia nohamafisin’ny Frantsay fa hisy ny fandinihana lalina hataon’i Frantsa amin’ireo mpiara-miombon’antoka eoropeanina ary handraisan’ny Frantsay anjara ihany koa ny fifampidinihana karakarain’ny Vondrona Afrikana mahakasina an’i Madagasikara.
Mitohy hatrany ny tsindry sy ny tery vaimanta ataon’ny Frantsay manoloana ny fikasan’izy ireo hanilika ireo kandidà telo mianaka amin’ny fifidianana Filoham-pirenena.
Tsy vao voalohany anefa izao i Lafrantsa no nanao fanambaràna toy izao ary efa nandrangaranga sazy ho azy telo ireo aza. Ireto farany anefa dia mampiseho fa rano atondraka an-damosin-gana ihany izany rehetra izany. Ny Filoha Rajoelina dia efa nilaza mazava ny heviny mahakasika izany fa : « tsy fotoana iresahana izay ho kandidà na tsia intsony izao fa efa tokony hiroso amin’ny adihevitra hanavotana an’i Madagasikara. […] Toa tsangan’olona no iadian-kevitra fa tsy ny ho avin’i Madagasikara ? ». Etsy an-kilany ny kandidà Lalao Ravalomanana efa mihevitra ho toy ny tsy misy izany rehetra izany fa ny fitetezam-paritra ihany no tohizany. Ny Amiraly kosa dia tsy dia ahenoan-teny firy momba izany raha efa nilaza kosa izy fa « tsy misy iraharahany izay ny sazy ».
Mifanohitra amin’ny fomba fijerin’ny mpitondra tenin’ny « Quai d’Orsay » kosa ny hevitry ny Sekretera Jeneralin’ny vondron’ny Firenena miteny frantsay, Abdou Diouf, izay mbola misisika mafy amin’ny fanatanterahana ny fifidianana : « ny daty efa voafaritry ny Malagasy niaraka tamin’ny Firenena mikambana, araka ny Tondrozotra, ihany no tokony hiaingana hanaovana ny fifidianana Filoham-pirenena ». Mahakasika ny resaka sazy kosa dia nambaran’i Abdou Diouf fa : « tsy vahaolana ny sazy ho an’olon-tokana satria ny fanaovana fifidianana araka izay voafaritry ny Tondrozotra ihany no hanafaka an’i Madagasikara amin’ny krizy ankehitriny ».